COVID nipoaka tany Afrika: 7.7 miliara dolara amerikana tsy zakan'izao tontolo izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » COVID nipoaka tany Afrika: 7.7 miliara dolara amerikana tsy zakan'izao tontolo izao
Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Afrika Atsimo • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
WHO: Ny 90% -n'ny serivisy ara-pahasalamana ataon'ny firenena dia mitohy manelingelina ny areti-mifindra COVID-19
Ny variana Delta dia mametraka izao tontolo izao amin'ny fanohanana mivantana. Tandindomin-doza izao tontolo izao, saingy tsy misy faritra mihoatra an'i Afrika. IZAY mila 7.7 miliara dolara ho an'i Afrika izao, ary tsy zakan'izao tontolo izao tsy hiraharaha. Araka ny nolazain'ny filoham-pirenena amerikana Biden: “Miaraka amin'izany isika rehetra. tsy misy olona azo antoka mandra-pilamin'ny tsirairay. ”
Notaterin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana tany Afrika fa nitombo 80% ny olona maty tao anatin'ny 4 herinandro lasa. Ny ankamaroan'ity fiakarana ity dia tarihin'ny karazana Delta azo nafindra, izay efa hita tany amin'ny firenena 132 farafaharatsiny.
Ny WHO dia manohana ireo firenena amin'ny famatsiana oksizenina, miaraka amin'ny torolàlana hanampiana ireo firenena hamantatra tsara kokoa ny karazany, ary manohy miasa isan'andro miaraka amin'ireo tambajotran'ireo manampahaizana manerantany izahay mba hahatakatra ny antony mahatonga ny delta variant hiely mora foana.
Ny tanjon'ny OMS dia ny hanohana hatrany ny firenena rehetra hanome vaksiny farafaharatsiny 10% ny mponina amin'ny faran'ny volana septambra, farafaharatsiny 40% amin'ny faran'ity taona ity, ary 70% amin'ny tapaky ny taona manaraka. Latsaky ny 2% ny fatra rehetra notanterahina manerantany no natao tany Afrika. 1.5% monja amin'ny mponina ao amin'ny kaontinanta no vita vaksiny feno.
Androany dia niroso tamin'ny dingana iray hafa ny WHO, miaraka amina taratasy fikasana izay mamaritra ny fepetra fiaraha-miasa nosoniavin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny foibe: WHO; ny dobo fametahana patanty fanafody; Afrigen Biologics; ny Ivontoerana biolojika sy vaksiny any Afrika atsimo; ny Konseho momba ny fikarohana ara-pitsaboana afrikanina tatsimo sy ny ivon-toerana momba ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina.
Ny tanjon'ny OMS dia ny hanohana hatrany ny firenena rehetra hanome vaksiny farafaharatsiny 10% ny mponina amin'ny faran'ny volana septambra, farafaharatsiny 40% amin'ny faran'ity taona ity, ary 70% amin'ny tapaky ny taona manaraka. Latsaky ny 2% ny fatra rehetra notanterahina manerantany no natao tany Afrika. 1.5% monja amin'ny mponina ao amin'ny kaontinanta no vita vaksiny tanteraka.
Ho valin'ny fitomboan'ny Delta, androany ny Access to COVID-19 Tools Accelerator dia mandefa ny Rapid ACT-Accelerator Delta Response, na RADAR, namoaka antso maika mitaky 7.7 miliara dolara amerikana ho an'ny fitsapana, fitsaboana ary vaksinina.
Mifanaraka amin'izany dia mila famatsiam-bola fanampiny amin'ity taona ity isika mba hampiasan'ny COVAX ny safidiny mividy vaksininy ho an'ny 2022.
Ny tale jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia mitarika ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ary tendren'ny, ary tompon'andraikitra amin'ny Antenimieran'ny fahasalamana manerantany. Ny tale jeneraly ankehitriny dia i Tedros Adhanom, izay voatendry tamin'ny 1 Jolay 2017
Niresaka tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly momba ny State of COVID-19 any Afrika izy.
Salama maraina, tolak'andro ary hariva.
Tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity dia nanana voninahitra ny nandeha tany Bahrain sy Koety aho, izay nanokafan'ny WHO ny biraon'ny firenena roa vaovao.
Nanana fotoana ihany koa aho nitsidika fotodrafitrasa maro izay natsangana hamaly ny COVID-19 ary tena talanjona tamin'ny fomba vaovao sy feno.
Manana biraom-panjakana 152 manerantany isika izao. Izy ireo no ivon'ny ataon'ny WHO - firenena manohana amin'ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ary hanatsara ny fahasalaman'ny mponina ao aminy.
Talohan'izay dia voninahitra lehibe ny nanasana ahy tany Tokyo hiteny amin'ny Komity Olaimpika Iraisam-pirenena.
Nandeha namaly fanontaniana napetraka matetika tamiko aho: rahoviana no hifarana ny areti-mandringana?
Ny navaliko dia hifarana ny areti-mandringana rehefa safidin'izao tontolo izao ny hampitsahatra azy. Eo am-pelatanantsika io.
Manana ny fitaovana ilaintsika rehetra isika: afaka misoroka an'io aretina io isika, afaka mitsapa izany ary afaka mitsabo azy.
Ary hatramin'ny nanatontosana ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety farany antsika dia mbola nitohy ny fiakarana ny tranga sy ny fahafatesan'ny COVID-19.
Tranga efa ho 4 tapitrisa no notaterina tany amin'ny WHO tamin'ny herinandro lasa teo, ary amin'ny fironana ankehitriny, antenainay fa hahatratra 200 tapitrisa ny isan'ireo tranga ao anatin'ny tapa-bolana manaraka. Ary fantatray fa ambanin-javatra izany.
Amin'ny salan'isa, amin'ny dimy amin'ireo faritra enina an'ny OMS, ny aretina dia nitombo 80%, na efa ho avo roa heny, tao anatin'ny efa-bolana lasa izay. Any Afrika, nitombo 80% ny olona maty nandritra io fotoana io ihany.
Ny ankamaroan'io fiakarana io dia tarihin'ny karazana Delta azo nafindra, izay efa hita tany amin'ny firenena 132 farafaharatsiny.
Nampitandrina ny WHO fa niova ny virus COVID-19 hatramin'ny nitaterana azy voalohany ary mitohy miova izy io. Hatreto dia karazana fanahiana efatra no nipoitra, ary mbola hisy ihany raha mbola miely hatrany ny viriosy.
Ny fiakarana koa dia entin'ny fitomboan'ny fifangaroana ara-tsosialy sy ny fivezivezena, ny fampiasana tsy tapaka ny fahasalamam-bahoaka sy ny fepetra ara-tsosialy ary ny fampiasana vaksiny tsy mitovy.
Tandindomin-doza ny fahazoana mafy ny fandresena, ary ny rafitra ara-pahasalamana any amin'ny firenena maro no tototry.
Ny fitomboan'ny isan'ny aretina dia miteraka tsy fahampian'ny fitsaboana toy ny oksizenina mpamonjy aina.
Firenena sivy amby roapolo no manana filàna oksizenina avo sy miakatra, ary firenena maro no tsy manana famatsiana fitaovana ilaina fototra hiarovana ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny laharana.
Mandritra izany fotoana izany, ny taham-pitsapana amin'ny firenena ambany karama dia latsaky ny 2 isanjaton'ny any amin'ny firenena be vola - mamela an'izao tontolo izao tsy hahita ny toerana misy ny aretina sy ny fiovana.
Raha tsy misy ny taham-pitsapana tsara kokoa manerantany, dia tsy afaka miady amin'ny aretina amin'ny laharam-pahamehana isika na manalefaka ny mety hisian'ny fiovana vaovao sy mampidi-doza mipoitra.
Fa mila bebe kokoa isika:
Mila fanaraha-maso matanjaka kokoa isika;
Mila fitiliana stratejika bebe kokoa izahay hanatsarana ny fahatakarana manerantany ny toerana misy ny virus, izay ilana fitsabahana amin'ny fahasalamam-bahoaka, ary hanokanana ireo tranga ary hampihena ny fifindran'ny aretina;
Mila marary handray fitsaboana ara-pahasalamana mialoha isika amin'ny alàlan'ny mpiasan'ny fahasalamana voaofana sy voaaro, miaraka amin'ny oxygen bebe kokoa hitsaboana ireo marary mafy ary hamonjy ain'olona;
Mila mpiasan'ny fahasalamana voaofana tsara sy voaaro tsara izahay ary ny rafitra hanaterana ny serivisy sy ny fitaovana hamonjy aina;
Mila fikarohana sy fampandrosoana bebe kokoa isika hahazoana antoka fa ny fitsapana, ny fitsaboana, ny vaksinina ary ny fitaovana hafa dia mandaitra hatrany amin'ny Delta variant sy ireo karazany hafa mipoitra;
Ary mazava ho azy, mila vaksiny bebe kokoa isika.
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara izahay fa manangana foibe famindrana teknolojia ho an'ny vaksinin'ny mRNA any Afrika atsimo, ho ampahany amin'ny ezaka ataonay hampitomboana ny famokarana vaksinina.
Androany dia nanao dingana hafa mandroso isika, miaraka amina taratasy fikasana izay mamaritra ny fepetra momba ny fiaraha-miasa nosoniavin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny foibe: WHO; ny dobo fametahana patanty fanafody; Afrigen Biologics; ny Ivontoerana biolojika sy vaksinin'ny Afrika atsimo; ny Konseho momba ny fikarohana ara-pitsaboana afrikanina tatsimo sy ny ivon-toerana momba ny fanaraha-maso sy ny fisorohana aretina.
Ny tanjon'ny OMS dia ny hanohana hatrany ny firenena rehetra hanome vaksiny farafaharatsiny 10% ny mponina amin'ny faran'ny volana septambra, farafaharatsiny 40% amin'ny faran'ity taona ity, ary 70% amin'ny tapaky ny taona manaraka.
Mbola lavitra ny fanatanterahana ireo tanjona ireo.
Hatreto dia ny antsasaky ny firenena fotsiny no nanao vaksiny feno ny 10% -n'ny mponina ao aminy, latsaky ny ampahefatry ny firenena no nanao vaksiny 40%, ary firenena 3 ihany no nanao vaksiny 70%.
Herintaona lasa izay, nanomboka naneho ny ahiahiny momba ny fandrahonana ny 'nasionalisme vaksiny' ny WHO;
Tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Novambra, nampitandrina ny amin'ny mety hisian'ny “fanitsakitsahana ny mahantra maneran-tany” isika;
Ary tamin'ny fivorian'ny birao mpanatanterahan'ny WHO tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, nilaza izahay fa eo an-tokonan'ny "tsy fahombiazan'ny fitondran-tena mahatsiravina".
Ary na izany aza ny fizarana vaksinim-pirenena dia mijanona ho tsy ara-drariny.
Tandindomin-doza ny faritra rehetra, saingy tsy misy afa tsy i Afrika.
Amin'ny fironana ankehitriny, efa ho 70% ny firenena afrikanina no tsy hahatratra ny tanjona kendrena vaksiny 10% amin'ny faran'ny volana septambra.
Dosis manodidina ny 3.5 tapitrisa ka hatramin'ny 4 tapitrisa no ampiasaina isan-kerinandro any amin'ny kaontinanta, saingy raha te hahatratra ny tanjona amin'ny volana septambra dia tokony hiakatra hatramin'ny 21 tapitrisa fatra farafaharatsiny isan-kerinandro.
Firenena afrikanina maro no niomana tsara tamin'ny famoahana vaksiny, saingy mbola tsy tonga ireo vaksiny.
Latsaky ny 2% ny fatra rehetra notanterahina manerantany no natao tany Afrika. 1.5% monja amin'ny mponina ao amin'ny kaontinanta no vita vaksiny feno.
Olana lehibe tokoa io raha toa ka handray andraikitra manohitra ity areti-mandringana ity isika ary mamarana azy.
Ity fampiasam-bola ity dia ampahany kely amin'ny vola lanin'ny governemanta hiatrehana ny COVID-19.
Ny fanontaniana dia tsy ny fahafahan'ny izao tontolo izao manao izao fampiasam-bola izao; io ve raha mahavita tsy.
Mustajaba Hassan hoy:
3 Aogositra 2021 amin'ny 09:22
Andriamatoa / Ramatoa
Jntour sy Travel manoratra hanontany amin'ny orinasanao
dia liana hanao
orinasa miaraka aminao. The Jntour & Travel Ltd dia orinasa monina ao Zanzibar, Tanzania
manomana fonosana anatiny mba hifanaraka amin'ny mpanjifanay
filana. Tianay ny miara-miasa aminao amin'ny maha agents anao.
Raha misy fanontaniana na mila mifampiresaka dia aza misalasala
mailaka izahay amin'ny [email voaaro]
ho fanazavana bebe kokoa. Na tsidiho tsara ny tranokalanay
Talen'ny Jntour Company ltd